Agya, Ɔba, ne Honhom Kronkron Ho Nokwasɛm - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
So Nea na Onyankopɔn Pɛ Ni?
TI BIAKO Dɛn Ne Onyankopɔn Ho Nokwasɛm?
TI ABIEN Bible—Nhoma a Efi Onyankopɔn Hɔ
TI ABIƐSA Dɛn Nti na Onyankopɔn Bɔɔ Asase?
TI ANAN Hena Ne Yesu Kristo?
TI ANUM Agyede No—Onyankopɔn Akyɛde a Ɛsen Biara
TI ASIA Ɛhe na Awufo Wɔ?
TI ASON Anidaso Ankasa Wɔ Hɔ Ma W’adɔfo a Wɔawuwu No
TI AWOTWE Dɛn Ne Onyankopɔn Ahenni?
TI AKRON So Yɛte “Nna a Edi Akyiri” no Mu?
TI DU Honhom Abɔde—Sɛnea Wɔn Nneyɛe Ka Yɛn
TI DUBIAKO Dɛn Nti na Onyankopɔn Ma Amanehunu Ho Kwan?
TI DUMIEN W’abrabɔ a Wobɛma Asɔ Onyankopɔn Ani
TI DUMIƐNSA Onyankopɔn Adwene a Yebenya Wɔ Nkwa Ho
TI DUNAN Sɛnea Wobɛma W’abusua Asetra Ayɛ Anigye
TI DUNUM Ɔsom a Ɛsɔ Onyankopɔn Ani
TI DUNSIA Fa Wo Ho Hyɛ Nokware Som Mu
TI DUNSON Bɛn Onyankopɔn Wɔ Mpaebɔ Mu
TI DUNWƆTWE Asubɔ ne Wo ne Onyankopɔn Ntam Abusuabɔ
TI DUNKRON Fa Wo Ho Sie Onyankopɔn Dɔ Mu
NKEKAHO Onyankopɔn Din—Sɛnea Wɔde Di Dwuma ne Nea Ɛkyerɛ
NKEKAHO Sɛnea Daniel Nkɔmhyɛ no Kaa Mesia no Mmae Ho Asɛm Siei
NKEKAHO Yesu Kristo—Mesia a Wɔhyɛɛ Ne Ho Bɔ No
NKEKAHO Agya, Ɔba, ne Honhom Kronkron Ho Nokwasɛm
NKEKAHO Nea Enti a Nokware Kristofo Mfa Mmeamudua Nni Dwuma Wɔ Ɔsom Mu
NKEKAHO Awurade Anwummeduan—Afahyɛ a Ɛhyɛ Onyankopɔn Anuonyam
NKEKAHO “Ɔkra” ne “Honhom”—Dɛn na Saa Nsɛmfua Yi Kyerɛ Ankasa?
NKEKAHO Dɛn ne Sheol ne Hades?
NKEKAHO Atemmu Da—Ɛyɛ Dɛn?
NKEKAHO 1914—Afe Titiriw Wɔ Bible Nkɔmhyɛ Mu
NKEKAHO Hena ne Ɔbɔfo Panyin Mikael?
NKEKAHO “Babilon Kɛse” no a Wubehu
NKEKAHO So Wɔwoo Yesu December Mu?
NKEKAHO So Ɛsɛ sɛ Yedi Afahyɛ Ahorow?
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Ateso Australian Sign Language Aymara Bambara Baoule Basque Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou British Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Costa Rican Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabyle Kalenjin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Mingrelian Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Rarotongan Romanian Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Wolof Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Agya, Ɔba, ne Honhom Kronkron Ho Nokwasɛm
NNIPA a wogye Baasakoro nkyerɛkyerɛ no di ka sɛ baasa na wɔbom yɛ Onyankopɔn—Agya, Ɔba, ne Honhom Kronkron. Wɔkyerɛ sɛ baasa yi mu biara ne afoforo a aka no tumi yɛ pɛ, na wɔn mu biara nni mfiase. Enti, sɛnea Baasakoro nkyerɛkyerɛ kyerɛ no, Agya no yɛ Onyankopɔn, Ɔba no yɛ Onyankopɔn, na Honhom Kronkron no nso yɛ Onyankopɔn, nanso Onyankopɔn biako pɛ na ɔwɔ hɔ.
Nnipa pii a wogye Baasakoro di no gye tom sɛ wontumi nkyerɛkyerɛ saa nkyerɛkyerɛ yi mu. Nanso, wosusuw sɛ ɛyɛ Bible nkyerɛkyerɛ. Ɛsɛ sɛ yɛhyɛ no nsow sɛ, asɛmfua “Baasakoro” no mpue wɔ Bible mu baabiara. Na so Baasakoro ho adwene bi wɔ Bible mu? Nea ɛbɛyɛ na yɛabua saa asɛm yi no, ma yensusuw kyerɛwsɛm bi a wɔn a wogye Baasakoro nkyerɛkyerɛ tom no taa twe adwene si so de gyina nkyerɛkyerɛ a ɛte saa akyi no ho nhwɛ.
“NA ASƐM NO YƐ ONYANKOPƆN”
Yohane 1:1 ka sɛ: “Mfiase no na Asɛm no wɔ hɔ, na Asɛm no ne Nyankopɔn na ɛwɔ hɔ, na Asɛm no yɛ Onyankopɔn.” (Twi Bible, Akuapem) Akyiri yi, wɔ saa ti no ara mu no, ɔsomafo Yohane daa no adi pefee sɛ “Asɛm no” ne Yesu. (Yohane 1:14) Nanso, esiane sɛ wɔfrɛ Asɛm no Onyankopɔn nti, ebinom ka sɛ, ɛsɛ sɛ Ɔba no ne Agya no nyinaa yɛ Onyankopɔn koro.
Kae sɛ wodii kan kyerɛw Bible no fã yi wɔ Hela kasa mu. Akyiri yi na nsɛm asekyerɛfo kyerɛɛ ase fii Hela kasa mu kɔɔ kasa afoforo mu. Nanso, Bible asekyerɛfo dodow bi anka sɛ “na Asɛm no yɛ Onyankopɔn.” Dɛn ntia? Saa asekyerɛfo no nam Hela a wɔde kyerɛw Bible no ho nimdeɛ a na wɔwɔ so begye toom sɛ ɛnsɛ sɛ wɔkyerɛ asɛm a wɔakyerɛ ase “na Asɛm no yɛ Onyankopɔn” no ase wɔ saa kwan no so. Na anka ɛsɛ sɛ wɔkyerɛ ase dɛn? Nhwɛso kakra ni: “Ná Logos [Asɛm] no yɛ ɔsoroni.” ( A New Translation of the Bible ) “Ná Asɛm no yɛ onyame bi.” ( The New Testament in an Improved Version ) “Ná Asɛm no ne Onyankopɔn na ɛwɔ hɔ, na na ɔyɛ Onyankopɔn sɛso.” ( The Translator’s New Testament ) Sɛnea saa nkyerɛase yi kyerɛ no, Asɛm no nyɛ Onyankopɔn ankasa.* Mmom no, esiane dibea a ɛkorɔn a Asɛm no wɔ wɔ Yehowa abɔde mu nti wɔfrɛ no “onyame.” Ɛha no asɛm “onyame” no kyerɛ “otumfoɔ.”
YƐ NHWEHWƐMU KƆ AKYIRI
Nnipa dodow no ara na wonnim Hela kasa a wɔde kyerɛw Bible no. Enti wobɛyɛ dɛn atumi ahu nea na ɔsomafo Yohane kyerɛ ankasa? Susuw nhwɛso yi ho hwɛ: Fa no sɛ sukuu kyerɛkyerɛfo bi kyerɛkyerɛ sɛnea wobu akontaa bi mu kyerɛ ne sukuufo. Ɛno akyi no, sukuufo no adwene nhyia wɔ nkyerɛkyerɛmu a ɔkyerɛkyerɛfo no de ma no ho. Sukuufo no bɛyɛ dɛn ate ade a wɔresua no ase yiye? Wobetumi abisa ɔkyerɛkyerɛfo no ma wakyerɛkyerɛ mu akɔ akyiri. Akyinnye biara nni ho sɛ, nkyerɛkyerɛmu foforo a wobenya aka ho no bɛboa wɔn ma wɔate ade a wɔresua no ase yiye. Saa ara na sɛ wopɛ sɛ wote Yohane 1:1 ase a, wubetumi ahwehwɛ Yesu dibea ho nsɛm pii wɔ Yohane Asɛmpa no mu. Asɛm yi ho ade pii a wubesua no bɛboa wo ma woahu emu nokwasɛm.
Sɛ nhwɛso no, susuw nea Yohane san kyerɛwee wɔ ti 1, nkyekyɛm 18 [Twi Bible, Akuapem] no ho hwɛ: “Obi nhuu [Ade Nyinaa So Tumfoɔ] Nyankopɔn pɛn.” Nanso, nnipa ahu Yesu, Ɔba no pɛn, efisɛ Yohane ka sɛ: “Asɛm no [Yesu] bɛyɛɛ ɔhonam, na ɔbɛtraa yɛn mu, na yehuu n’anuonyam.” (Yohane 1:14, Twi Bible, Akuapem) Ɛnde, ɛbɛyɛ dɛn na Ɔba no betumi ayɛ Ade Nyinaa So Tumfoɔ Nyankopɔn no fã bi? Yohane ka nso sɛ, ná Asɛm no “ne Nyankopɔn na ɛwɔ hɔ.” Ɛnde ɛbɛyɛ dɛn na yebetumi aka sɛ obi ne obi wɔ hɔ na bere koro no ara yɛasan aka sɛ ɔyɛ onipa koro no ara? Afei nso, sɛnea wɔayɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ Yohane 17:3 no, Yesu maa emu daa hɔ pefee sɛ ɛsono ɔno ɛnna ɛsono ne soro Agya no. Ɔfrɛɛ N’agya “nokware Nyankopɔn koro pɛ no.” Na ɛrekɔ Yohane Asɛmpa no awiei no, Yohane bɔɔ asɛm no mua sɛ: “Wɔakyerɛw eyinom ato hɔ na moagye adi sɛ Yesu ne Kristo, Onyankopɔn Ba no.” (Yohane 20:31) Hyɛ no nsow sɛ wɔfrɛɛ Yesu, Onyankopɔn Ba, na ɛnyɛ Onyankopɔn. Saa nsɛm foforo yi a ɛwɔ Yohane Asɛmpa no mu yi ma yehu sɛnea ɛsɛ sɛ yɛte Yohane 1:1 no ase. Yesu, Asɛm no, yɛ “onyame” a ɛkyerɛ sɛ, ɔwɔ dibea a ɛkorɔn, nanso ne dibea nnu Ade Nyinaa So Tumfoɔ Nyankopɔn no de.
HWEHWƐ NKYERƐKYERƐMU A ƐFOA DEDAW NO SO
Susuw sukuu kyerɛkyerɛfo no ne sukuufo no asɛm no ho bio hwɛ. Fa no sɛ sukuufo no bi adwenem da so yɛ wɔn nãã bere mpo a ɔkyerɛkyerɛfo no de nkyerɛkyerɛmu a ɛkɔ akyiri ama wɔn no. Dɛn na sukuufo no betumi ayɛ? Wobetumi akɔ ɔkyerɛkyerɛfo foforo nkyɛn akogye ade koro no ara ho nkyerɛkyerɛmu foforo. Sɛ ɔkyerɛkyerɛfo a ɔto so abien no foa nea odi kan no nkyerɛkyerɛmu no so a, ebia sukuufo a wɔntee ase no mu dodow no ara adwenem a ayɛ wɔn nãã no befi hɔ. Saa ara na sɛ w’adwene nsi wo pi wɔ nea na Bible kyerɛwfo Yohane reka afa abusuabɔ ankasa a ɛda Yesu ne Ade Nyinaa So Tumfoɔ Nyankopɔn ntam ho a, wubetumi adan akɔ Bible kyerɛwfo foforo nkyɛn akɔhwehwɛ nkyerɛkyerɛmu foforo. Sɛ nhwɛso no, susuw nea Mateo kyerɛwee no ho hwɛ. Ɔkyerɛwee sɛ, Yesu ka faa wiase yi awiei ho sɛ: “Ɛdefa saa da no ne dɔn no ho de obiara nnim, abɔfo a wɔwɔ soro ne Ɔba no mpo nnim, gye Agya no nko.” (Mateo 24:36) Ɔkwan bɛn so na saa asɛm no foa so sɛ Yesu nyɛ Ade Nyinaa So Tumfoɔ Nyankopɔn?
Yesu kae sɛ Agya no nim nneɛma pii sen Ɔba no. Nanso, sɛ Yesu yɛ Ade Nyinaa So Tumfoɔ no fã bi a anka ɔne N’agya nimdeɛ bɛyɛ pɛ. Enti, eyi kyerɛ sɛ Ɔba no ne Agya no ntumi nyɛ pɛ. Nanso, ebinom bɛka sɛ: ‘Ná Yesu wɔ nipasu abien. Ɛha yi na ɔrekasa sɛ onipa.’ Nanso, sɛ ɛte saa mpo a, honhom kronkron no nso ɛ? Sɛ ɛyɛ Onyankopɔn koro no ara fã te sɛ Agya no a, adɛn nti na Yesu anka sɛ honhom kronkron no nim nea Agya no nim?
Bere a wugu so resua Bible no, wubehu Bible mu nsɛm pii a ɛfa saa asɛm yi ho. Ɛma wuhu nokwasɛm a ɛfa Agya, Ɔba, ne honhom kronkron no ho yiye.—Dwom 90:2; Asomafo Nnwuma 7:55; Kolosefo 1:15.
* Ase hɔ asɛm Sɛ wopɛ Yohane 1:1 ho nsɛm foforo a, hwɛ November 1, 2008, Borɔfo Ɔwɛn-Aban a Yehowa Adansefo atintim no kratafa 24-25.
← Hwɛ ti a wɔtwe adwene si so no